Izmir မြို့ပြစည်ပင်သာယာ | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
စက်ဘီးဖြင့်ကျောင်းတက်နေသောကလေးများမှအဓိပ္ပါယ်ရှိသောသတင်းစကား! 'ဓာတ်ဆီမသုံးပါနဲ့၊ ဆီလောင်ပါစေ'; İzmir Metropolitan မြူနီစီပယ်က၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ Mavişehir Eraslan ကောလိပ်၏ကျောင်းသားများပြီးနောက် Karşıyaka Evin Leblebicioğluအလယ်တန်းကျောင်းသားများ [ပို ... ]
Altınyolတွင်စတုတ္ထလမ်းကြောသည်ပြီးဆုံးပြီးဖြစ်သည်။ မော်တော်ယာဉ်အသွားအလာနှင့်အများဆုံးထိတွေ့နေသော Izmir ၏အဓိကသွေးလွှတ်ကြောများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Altinyol တွင်လမ်းဖောက်လုပ်မှုများပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ကန ဦး အချက်အလက်ထည့်သွင်းရန်စတုတ္ထလမ်းကြောကြောင့်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုလျှော့ချသည် [ပို ... ]
ESHOT မှဘတ်စ်ကားလိုင်းအသစ် ၂ ခု၊ ESHOT အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနသည် Izmir တွင်ဘတ်စ်ကားလိုင်းအသစ် ၂ ခုကိုတာဝန်ပေးခဲ့သည်။ Izmir အစည်းအဝေးတွင် IZTECH ကျောင်းသားများ၏အမြန်ဘတ်စ်ကားလိုအပ်ချက်ကိုဖြေကြားခဲ့သည်။ ခရီးသည်အသွားအလာနှင့် [ပို ... ]
မြို့တော်ဝန် Arda -“ Gaziemir Metro ကိုငါ့အိပ်မက်အကောင်အထည်ပေါ်လာပြီ”
Gaziemir မြို့တော်ဝန် Halil Arda ကရွေးကောက်ပွဲကတိတော်များ၏ရှေ့တန်းမှဖြစ်သော Gaziemir Metro ကိုတင်ဒါခေါ်ယူရန် Izmir Metropolitan Municipality အတွက်အားရဖွယ်ကောင်းသောတိုးတက်မှုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Karabağlarမြေအောက်ရထားလမ်းပထမအဆင့်၊ İzmir Metropolitan မြူနီစီပယ်ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်ကိုKarabağlarပါဝင်လိမ့်မည်။ Halkapınar-Karabağlar metro line အတွက်စီမံကိန်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါစတင်ခဲ့သည်။ Izmir Metropolitan မြူနီစီပယ်, 179 [ပို ... ]
İzmirရှိမသန်စွမ်းသူများအတွက်ဘတ်စ်ကားစီးရခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။ Izmir ရှိအများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအသုံးပြုသောမသန်စွမ်းသူများ၏ဘ ၀ ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ESHOT အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနသည်ဌာနခွဲများကိုဖွင့်လှစ်ထားသည်။ မြို့တွင်းရှိသတိပေးစနစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်မြို့တွင်း၌မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်း၊ မှတ်တိုင်နှင့်ဘတ်စ်ကား [ပို ... ]
İzmir’de Trafik Çizgileri Yenilemede Örnek Uygulama ; İzmir Büyükşehir Belediyesi yollardaki şeritler, bisiklet yollarındaki uyarı işaretleri gibi trafik işaretlerini yeniden çizmek yerine eskilerini temizleyerek görünür kılan bir uygulama başlattı. Böylece [ပို ... ]
zmir Narlıdereမြေအောက်ရထားနှစ်ခုစခန်း; ပထမဘူတာနှစ်ခုသည် ahzmir Metropolitan Municipality မှတည်ဆောက်သော Fahrettin Altay နှင့်Narlıdereအကြား 7,2 ကီလိုမီတာလိုင်းပေါ်တွင်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုချိတ်ဆက်ထားသည်။ Izmir မြို့ပြမြူနီစီပယ်, 2018 ဇွန်လ [ပို ... ]
ESHOT Bus Stations မှသတင်းအချက်အလက်များကိုအသစ်ပြောင်းခြင်း
Izmir Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ ESHOT အထွေထွေညွှန်ကြားမှုသည်သတင်းအချက်အလက်စာရွက်စာတမ်းများကိုဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များတွင်အဆင့်မြှင့်တင်နေသည်။ Izmir Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ ESHOT အထွေထွေညွှန်ကြားမှုသည်သတင်းအချက်အလက်စာရွက်စာတမ်းများကိုဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များတွင်အဆင့်မြှင့်တင်နေသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ Konak နှင့် Alsancak တို့ဖြစ်သည် [ပို ... ]
Karşıyaka အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Cigli သို့ဘတ်စ်ကားလိုင်းများ
ESHOT အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၊ 330 နံပါတ်Bostanlı Iskele - Evka3မက်ထရိုဘူတာလွှဲပြောင်းစင်တာနှင့် 816 အမှတ်Çiğliသင်တန်းဆေးရုံ - Çiğli Transfer စင်တာသည်ဘတ်စ်ကားလိုင်းများအကြားခရီးသည်များကိုသယ်ဆောင်သွားမည်။ [ပို ... ]
Izmir ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကျောင်းသားလက်မှတ်လျှော့စျေးလာသည်
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခကြေးငွေကိုနောက်ဆုံး 16 ဇူလိုင်လ 2018 တွင်ပြောင်းလဲခဲ့သော whichzmir Metropolitan Municipality သည် 1 နို ၀ င်ဘာမှစတင်မည့်အခွန်အခအသစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်စီစဉ်နေသည်။ အပြည့်အဝနှင့်လျှော့လက်မှတ်တွေအပေါ် 13 ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အတူ [ပို ... ]
Mobile WC ကို BZBAN Stations တွင်တပ်ဆင်လိမ့်မည်။ မိုဘိုင်းအိမ်သာများကို mirzmir ရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေရာများတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဘာသာရပ်လိုအပ်ကြောင်း Izmir Metropolitan Municipality မှ MHP Group မှထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ MZP Group မှ Izmir Metropolitan Municipality Assembly မှဒုဥက္ကVice္ဌ [ပို ... ]
12... 123 »